OpenExpo inovhura mikova yayo kune tekinoroji muna Chikumi 1 | Linux Vakapindwa muropa
OpenExpo inovhura mikova yayo kune tekinoroji muna Chikumi 1
OpenExpo inovhurazve masuo ayo muna Chikumi 1 kuMadrid, chaizvo zvichaitika muLa N @ ve. Yechina edition yeakakurumbira epagore Fair-Congress yakatsaurirwa kune yakavhurika-sosi tekinoroji munyika medu ichaitirwa imomo. Iyo nzvimbo yemamirimita mazana mashanu nemazana mapfumbamwe yakatsaurirwa kune yemahara uye yakavhurwa sosi tekinoroji shanduko isingakusiye usina hanya Kubva kuLxA tinokukurudzira kuti uende kune ino bhenji bhenji uko iwe kwaunogona kuwana zvazvino kuitika mune ino chikamu.
Vhura matekinoroji ndiyo nzira yakakwana kune yekuvandudza kwenzvimbo dzakasiyana dzemakambani uye chikamu chakakosha cheshanduko yedigital. PaOpenExpo Iwe unozogona kuzvionera wega kuti yakavhurika sosi uye emahara mapurojekiti anosimudzira hunyanzvi uye kukura kwebhizimusi pamatanho ese, izvo zvine simba repasirese pakushanduka kwenzvimbo yedu, masevhisi uye zvigadzirwa.
Pakati pevakakurumbira kupinda tichava navo Chema Alonso, CDO yazvino yeTelefonica, pamwe nevezvenhau uye vanozivikanwa vanoba kubva kuSpain. Pau Garcia-Milà, anovawo anopinda, anova ndiye muvambi wepurojekiti yakavhurika uye yakabudirira Eye OS, iyo yekushandisa sisitimu yakaitwa muSpain yatakakuudza nezvayo pane dzimwe nguva. Pau achatsanangura pfungwa ye "Fast Innovation" mumakambani ... Uye kana izvo zvikaita sezvisina kukwana kwauri, pachavewo nevamiriri vemakambani epamusoro-soro seTelefonica, Repsol, Uber, Liberty Seguros, BBVA, PCComponentes, Accenture Dhijitari, Oracle, Universia, Womenalia, Microsoft, Red Hat, nezvimwe, kupedzisa anopfuura makambani mazana maviri anobatanidzwa.
11 musangano makamuri uye mazana maviri emisangano iyo ichavhara chiitiko nemisoro dzakasiyana senge IoT, Smart Maguta, Big Data, OpenData, Cybersecurity, Robotic, CRM, CMS, e-Kudzidza, nezvimwe. Kunyangwe varipo vanogona kunakidzwa neFormula E simulators uko kwavanogona kunakidzwa. Uri kuenda kupotsa chiitiko chakakosha here? Kubva kuLinuxAdictos isu tinofambisa rubatsiro nekuwana matikiti emahara ako. Kuti uwane matikiti iwe unotofanira enda kune iyi link. Nakidzwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OpenExpo inovhura mikova yayo kune tekinoroji muna Chikumi 1
Windows Defender inotakurirwa kuLinux nekuda kwaTavis Ormandy
Iyo inotevera vhezheni yeWindows ichagadzirwa neFree Software